Ungahlukaniselana kanjani ngokuzenzakalela Okuthunyelwe Kwakho kweWordPress ku-LinkedIn Usebenzisa iZapier | Martech Zone
Elinye lamathuluzi engiwathanda kakhulu wokulinganisa nokushicilela ukuphakelwa kwami ​​kwe-RSS noma ama-podcast ami ezinkundleni zokuxhumana FeedPress. Ngeshwa, ipulatifomu ayinakho ukuhlanganiswa kwe-LinkedIn, noma kunjalo. Ngilule isandla ukubona ukuthi bazoyengeza yini futhi banginikeza esinye isisombululo - ukushicilela ku-LinkedIn nge Zapier.
I-Zapier WordPress Plugin ku-LinkedIn
IZapier imahhala ngokuhlanganiswa okumbalwa nemicimbi eyikhulu, ngakho-ke ngingasebenzisa lesi sixazululo ngaphandle kokuchitha imali kuso… okungcono kakhulu! Nakhu ukuthi ungaqala kanjani:
Faka Umsebenzisi we-WordPress - Ngingancoma ukungeza umsebenzisi ku-WordPress yeZapier nokusetha iphasiwedi ethile. Ngale ndlela, akudingeki ukhathazeke ngokushintsha iphasiwedi yakho.
Faka i-Zapier WordPress Plugin - The I-plugin ye-Zapier WordPress ikuvumela ukuthi uhlanganise okuqukethwe kwakho kwe-WordPress kumathani wezinsizakalo ezahlukahlukene. Faka igama lomsebenzisi nephasiwedi oyibekele iZapier.
Faka i-WordPress ku-LinkedIn Zap - The IZapier LinkedIn ikhasi linezinombolo zokuhlanganiswa esezivele zibaliwe… okukodwa okuyi-WordPress ku-Linkedin.
I-Zapier WordPress kuya ku-LinkedIn Template
Ngena ngemvume ku-LinkedIn - uzocelwa ukuthi ungene ngemvume ku-LinkedIn futhi unikeze izimvume zokuhlanganiswa. Uma usukwenzile, iZap ixhunyiwe.
Vula i-Zap yakho - Nika amandla i-Zap yakho futhi ngokuzayo lapho ushicilela okuthunyelwe ku-WordPress, kuzokwabelwana ngakho ku-Linkedin! Manje uzobona iZap isebenza kuDeshibhodi yakho yeZapier.
Futhi lapho uya! Manje, lapho ushicilela okuthunyelwe kwakho ku-WordPress, kuzoshicilelwa ngokuzenzakalela ku-LinkedIn.
O… futhi manje njengoba sengishicilela lapho, mhlawumbe ungathanda ukungilandela ku-LinkedIn!
Landela Douglas Karr ku-LinkedIn
Tags: okuphakelayo ku-linkinLinkedInukushicilelwa kwe-linkedinshicilela i-wordpress ku-linkedinrss ku-linkinukushicilela ezinkundleni zokuxhumanaWordPressplugin wordpressi-wordpress ku-linkini-wordpress ku-linkedin zapzapperi-plugin ye-zapier yamagama